ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: December 2008
All Goals & HighLights Of Chelsea 2008/09
All goals and highlights of Chelsea matches in 2008/09 are available in HQ!!!!!
51 goals and 12 highlights! Pre-season, Premier League, Champions League and Carling Cup matches!
Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:12 PM No comments: Links to this post
Labels: 2008/09 Premier League HighLight
GameWeek - 20 ( All Matchs HighLights )
BBC Match of the Day | 624 x 352 | XviD | English
RAPIDSHARE /// MEDIAFIRE - MotD highlights
RAPIDSHARE - MotD highlights
RAPIDSHARE - Zshare - Iflie
Man Utd V Boro
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:16 AM No comments: Links to this post
Drogba: I almost quit football
Didier Drogba has revealed he almost quit football after falling out of love with the game.The Chelsea striker, who was sent off in last season's Champions League final, enduredadifficult summer with constant rumours surrounding his future at the club and says he became hugely disillusioned with life at Stamford Bridge."This summer, I didn't haveahead for football anymore," he told France Football. "I had completely lost my fire.
"I didn't want to hear talk of objectives or ambition anymore. I felt completely extinguished.
"For the first time in my career, I lost my passion for football. I was lost.
"Last season could have been terrific and spectacular, in the end it was justagood season which left quiteafew regrets."
Drogba has spent most of this season on the bench with Nicolas Anelka preferred in attack by coach Luiz Felipe Scolari.
But the 30-year-old says he still doesn't understand why he cannot play alongside the France international.
"For the moment, I just have to keep quiet," he added. "It's not because I've been here for more than four years that I have the right to have demands onastatus of starter.
"At the moment there isaman who is scoring and who is piling up goals. I only have to wait my turn.
"I have always said that I was happy that Nicolas came to Chelsea. But I still don't understand why coaches are scared to play us together."
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:13 AM No comments: Links to this post
2 Goals Of Franky - Download By
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:09 AM No comments: Links to this post
ဖူဟမ်းချဲလ်ဆီး ( ခန့်မှန်းချက် )
စကိုလာရီအနေနဲ့ တိုက်စစ်မှုး ၂ ယောက်စလုံး တွဲသုံးကြည့်နေပေမယ့် သိပ်တော့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ ဂျိုကိုလ်း ခြေပြန်မှန်လာလို့ အနည်းငယ် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ စိတ်တိုတက်တဲ့ ဘောလက်နေရာ ဒေကိုဝင်ဆော့နိင်သလို ၊ ချဲလ်ဆီးအနေနဲ့ ဆင်ကလဲယားကိုလည်း ထုတ်သုံးသင့်ပါပြီ။
အဲလက်စ်နဲ့ အိုင်ဗန်နိဗစ်ကလည်း မဆိုးပါဘူး။ ဦးတယ်ရီ မကန်ရတဲ့အချိန် အသင်းငယ်တွေနဲ့ တွေ့တာ ကံကောင်းတာပါ။ သို့သော်လည်း ဒီနှစ်ချဲလ်ဆီးကံကြမ္မာက သိပ်မကောင်းတာကို ဖန်တွေလည်း သုံးသပ်မိမှာပါ။
ဖူဟမ်ကလည်း နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ ၁ ပွဲနိင်ပြီး ကျန်တာ အဝေးကွင်း ၊ အိမ်ကွင်းသရေဆိုတော့ တော်တော် ပိတ်ကန်တက်တဲ့ အသင်းပါပဲ။
မနက်ဖြန်တော့ ချဲလ်ဆီးတွေ အောင်ပွဲခံနိင်ဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပြီးသားပါ။ ချီးယာာာာာာာာာာာာာာစ်
မနက်ဖြန်မှာကန်မည့် ဖူဟမ်ရဲ့ ( Craven Cottage )
ခန့်မှန်း - ၀း၂
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:06 AM No comments: Links to this post
Chelsea : WBA
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:03 AM No comments: Links to this post
GameWeek 19 ( All Match HighLights )
MEDIAFIRE /// RAPIDSHARE -highlights
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:57 AM No comments: Links to this post
Labels: 2008/09 Premier League HightLight
Chelsea2:0WBA ( Highlight )
HQ Highlight - Download By
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:40 PM No comments: Links to this post
Everton0:0Chelsea
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:19 PM No comments: Links to this post
အဲဗာတန်းချဲလ်ဆီး
ဒီရလဒ်ကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ချဲလ်ဆီးဟာ အဲဗာတန်နဲ့ ကန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြက်ပြက်သားသား အနိင်မယူနိင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ချဲလ်ဆီးဟာ လူတွေ အများအပြား နာနေတာကြောင့် တခါလာလည်း အနယ်လ်ကာ အထောင်နဲ့ တော်တော်များများ မန်နေဂျာကလည်း ဒါကို သိနေပါပြီ။ စကိုလာရီအနေနဲ့ ဒေကို ကိုထုတ်ပစ်ဖို့ နည်းလမ်းလဲ မမြင်ပါဘူး။
ဒီတော့ ကွင်းလယ်မှာ ဒေကိုအနေနဲ့ ခြေစွမ်းပြနိင်ဖို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပါပဲ။ ဒေကိုက ဘောလုံးကို ကိုင်ကစားချင်တာ များတာကြောင့် တော်တော်များများ သူ့ဆီက ပျက်သွားခဲ့ရတာပါ။ ကိုလမ်းပတ်တို့လို တချက်ထိ အမြန်ပြန်ပေးစနစ်နဲ့ ကန်နိင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်နိင်ပါတယ်။
အိမ်ကွင်း အခြေအနေဆိုးပေမယ့် အဝေးကွင်း စံချိန်တွေကြောင့်လည်း ဒီပွဲကို ၀း၂ ဂိုးလို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ နောက်ပြီး ချဲလ်ဆီးအနေဖြင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသင်းကြီး ၂ သင်း တွေ့ဆုံနေတဲ့ အချိန် ၊ အသင်းကြီး ၁ သင်း ပွဲကျန်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ အခွင့်အရေးကို ပိုင်နိင်စွာ အသုံးချသင့်ပါကြောင်း။
အဝေးကွင်း ၃ မှတ်ကို အပြည့်ယူဖို့အတွက်.......ညနေမှာ ကျင်းပမယ့် Goodison Park ကွင်းမှာ အောင်ပွဲခံကြပါစို့။
ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် Phil Dowd
ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည့် အဲဗာတန် အိမ်ကွင်း Goodison Park
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:45 AM No comments: Links to this post
Juventus are this season playing at one of their old homes, Turin's Stadio Olimpico (formally known as the Stadio Comunale) while the Stadio delle Alpi is reconstructed. The capacity of the Stadio Olimpico is 27,550.
It will be the first meeting between the clubs.The full draw is:
Inter v Man United
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:39 PM No comments: Links to this post
Game Week ( 17 ) HighLight
MEDIAFIRE /// RAPIDSHARE - MotD highlights
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:39 PM No comments: Links to this post
မနေ့က ခြင်္သေ့တွေ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေ ခက်ခဲစွာ သရေကျနေချိန်မှာ ဇယားထိပ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် မကန်နိင်ပဲ အများနည်းတူ လိုက်သရေကျခဲ့တာကတော့ တော်တော် ခံပြင်းဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်လိုမှ သရေဆိုတာကို လက်မခံနိင်ပါဘူး။ ၀က်စ်ဟမ်းကို ချဲလ်ဆီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် မနိင်စရာ အကြောင်း လုံးဝကို မရှိပါဘူး။ စကိုလာရီဟာ ဒေကို ကိုသိပ်အထင်ကြီးလွန်းနေပါတယ်။ ဒါဟာတော်တော့ကို လွဲမှားနေတာပါ။ ဒေကိုက သူ့နေရာသူမကစားပဲ နေရာအစုံလိုက်ဆော့သည့်အပြင် ၊ အမောကလည်း မခံနိင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ကန်ချက်တွေကလည်း လူထိတာတွေပဲများနေတာကြောင့် တော်တော် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဂျိုလ်ကိုးပြန်ဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဘောက်ဆင်ဝါနဲ့ ညှိနေတာ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ဘောက်ဆင်ဝါ အရင်လို အတက်ကင် ပိုင်းမှာ သိပ်မတင်နိင်တော့ပါဘူး။ သူ့ရှေ့က ဂျိုလ်ကိုးလ်ကို ပေးနေရတာနဲ့ ဘောလုံးက ပျက်နေတာ များပါတယ်။ စကိုလာရီကို ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ နောက်တပတ် မြို့ခံပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အဲဗာတန်နဲ့ကတော့ အဝေးကွင်းဆိုတော့ တော်တော်ကန်ရမှာပါ။ စိတ်လေတယ်။ :(
Download HQ ( highlight )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:41 PM No comments: Links to this post
HighLight ( Chelsea2: 1 Cluj )
1st Half Download By
2nd Half Download By
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:22 AM 1 comment: Links to this post
Labels: 2008/09 Champion League HightLight
ချဲလ်ဆီး ၂း၁ ကလုခ်ျ
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:33 AM No comments: Links to this post
GameWeek 16 ( HighLight )
MEDIAFIRE /// RAPIDSHARE - highlights
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:57 PM No comments: Links to this post
Chelsea : Cluj
ဒိုင်လူကြီး အဖြစ် Peter Fröjdfeldt
အနီကဒ် ၊ အ၀ါကဒ်နဲ့ ဘောလုံးသမားတွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ နာမည်ကြီးသူပါ
မနက်ဖြန်တော့ ခြင်္သေ့တွေဟာ အုပ်စုဗိုလ်အဖြစ်နဲ့ရော ၊ အုပ်စုအဆင့် အောင်နိင်ရေးအတွက်ပါ ကြိုးစားကစားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် မနိင်မဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ပွဲမှာ ချဲလ်ဆီး ကစားသမားတွေ ဘယ်လို ကြိုးစားကြမယ်ဆိုတာ စောင့်မျှော်ရတာနဲ့တင် ရင်ခုန်နေရပါပြီ။
ကိုလမ်းပတ်ကတော့ အနီကဒ်နဲ့ ယခုပွဲကို မကန်ဖြစ်ပါဘူး။ ကဲ.....ရင်ခုန်ကြမယ်ဗျာ။
Chelsea3:0Cluj
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:07 AM No comments: Links to this post
Goal Of The Month ( Collection )
Goal Of The Month ( November ) 08/09
Goal Of The Month ( October ) 08/09
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:38 PM No comments: Links to this post
Labels: Goals Of The Month
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:56 AM No comments: Links to this post
Bolton0:2Chelsea ( HighLight )
1st Great Goal By Anelka
2nd Fantastic Goal By Deco
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:08 AM No comments: Links to this post
Bolton : Chelsea ခန့်မှန်း
ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် Howard Webb
နောက်ဆုံး နှစ်ပွဲအဝေးကွင်း ဆက်တိုက် ရဂိုး ( ၇ ) ဂိုး ၊ ပေးဂိုး ( ၂ ) ဂိုးသာ ရှိခဲ့ရတဲ့ ဘော်လ်တန်ဟာ အဆင့် ၉ နေရာကို ရောက်လာလို့ စိတ်ဓတ် တက်ကြွနေမှာတော့ သေချာပါတယ်။ လူငယ်တိုက်စစ်မှုးနဲ့ အဓိက နောက်တန်းဖြစ်တဲ့
တို့ နှစ်ယောက် ဒဏ်ရာကြောင့် ပါဝင်နိင်ရန် မသေချာတာက လွဲလို့ Johan Elmander ၊ Davies ၊ Gardner တို့ဟာ အဓိက သတိထားရမယ့် ကစားသမားတွေပါ။
ခြင်္သေ့တွေ နောက်ဆုံးပွဲ ရှုံး ၊ သရေ တွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရလို့ ဇယားထိပ်က ၁ မှတ်အကွာနဲ့ ဆင်းပေးလိုက်ရတာကြောင့် ဒီတပတ် ရီဘုတ်စတေဒီယမ် ကွင်းမှာ ကန်မယ့် ပွဲမှာ ဂိုးပြက် ၊ ခြေပြက်နဲ့ မပေါက်ကွဲဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိင်ပါမလဲ။ တိုက်စစ်မှုး ဒရော့ဘာ ပွဲပယ်နေရပေမယ့် ချဲလ်ဆီးဟာ တိုက်စစ်ထက် ၊ ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အသင်းတစ်သင်း ဖြစ်နေဆဲပါ။ ကစားသမားအားလုံးဟာ အဆင့်အတန်းရှိပြီး ပွဲအဖြေကို ပြောင်းလဲ ပေးနိင်တာကြောင့် ၂ နှစ်ကြာ ပြန်လည် လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ ဒီဖလာကို ရယူဖို့အတွက် ဒီပွဲမှာ သက်သေပြန်လည် ပြသပါလိ့မ်မယ်။
Bolton Wdrs0:2Chelsea
Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:41 AM No comments: Links to this post
Kenyon: Drogba stays
Chelsea chief executive Peter Kenyon has insisted that Didier Drogba will not leave the club in January - nor will be any new faces arriving at Stamford Bridge once the transfer window opens.
The Ivorian striker's future has been the subject of much speculation afteratroubled start to the season was followed by reports ofameeting with representatives of Italian champions Internazionale.
But Kenyon remains adamant Drogba will stay and honour his contract, which runs until the end of next season.
Kenyon told BBC Sport: "Didier's under contract for the next 18 months. He will be going nowhere in January."
He added: "Whether people leave Chelsea is as much down to us as anybody else. I don't know whether he did or he didn't (meet Inter representatives).
"But he'sabig player for us and we want him back. He's one of those players who can makeadifference."
Drogba has been regularly linked withamove elsewhere with Inter, now led by former Chelsea boss Jose Mourinho, the current favourites to entice him away from Stamford Bridge.
Reports ofameeting with Inter sporting director Marco Branca and Mourinho's agent Jorge Mendes emerged in the build-up to the Blues' Champions League clash with Bordeaux.
Luiz Felipe Scolari denied he knew anything of the revelations and said: "I do not sleep with Drogba."
Drogba himself has done little to douse the flames of speculation, the striker merely reiterating he hadacontract with Chelsea until 2010.
The former Marseille player has enduredadifficult season and having missed the start of the campaign through injury he is yet to open his Premier League goals account.
And the 30-year-old is currently servingathree-match ban for throwingacoin back into the crowd during the Blues' Carling Cup defeat to Burnley.
But despite Drogba's problems, Kenyon appears determined to hang on to him, meaning there is little likelihood of Chelsea delving into the transfer market come January.
His regular involvement, along with the return of the likes of Ricardo Carvalho, Michael Essien and Juliano Belletti, will be relied on to help Chelsea's title push in the second half of the season.
"I don't think we will be doing any business in the January transfer window because the type of players we are looking for are not available," said Kenyon.
"Another reason is that we have still got some long-term injuries coming back and in January or February, Chelsea will have more player availability.
"We put our squad together in the summer and we are concentrating on the squad we have and making sure our players get back from injury. On that basis, we think we have gotagood enough squad to improve on last season."
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:20 AM No comments: Links to this post
Game Week 15 ( HightLights )
MEDIAFIRE - highlights
MEDIAFIRE /// RAPIDSHARE /// Zshare - highlights
RAPIDSHARE - Post match interviews and analysis
Mancheser City V Manchester United
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:01 AM No comments: Links to this post
ဒိုင်လူကြီးတွေကို သူတို့ကိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲအတွက် ပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဒါပြီးရင် သူတို့ဟာ သူတို့အမှားကို
သိနိင်ပါပြီ ။ အဲဒီအခါ သူတို့ ပါးစပ်က “ sorry ” ဆိုတဲ့ စကားတခွန်းကို ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်။
ဒါပါပဲ။ ဒီထက်ပိုပြီး မလိုချင်ပါဘူး။ ဒီလိုတောင်းဆိုရတာဟာလည်း သူတို့ဟာ အမှားတွေ
စည်းကျပ်ဒိုင်ဟာလည်း လူတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ အမှားလုပ်နိင်ပါတယ်။ သူမပေးခဲ့တဲ့
လူကျွံဘောကတဆင့် အာစင်နယ်ရခဲ့တဲ့ ချေပဂိုးဟာ ကျွန်တော့်အသင်းကို သတ်သွားခဲ့တာပါပဲ။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သာ နိင်ခဲ့ရင် အာစင်နယ် အသင်းကို ၁၃ မှတ်အကွာနဲ့
ချန်ပီယံလမ်းကြောင်းထဲက ထုတ်ပစ်နိင်ခဲ့ပါပြီ။ ကစားသမားတွေဟာလည်း ပထမချေပဂိုးအတွက်
အတော်ကို စိတ်ဆိုးခဲ့သလို သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပထမပိုင်းမှာပဲ ရရှိခဲ့တယ်ဆို
ကဲ အခုတော့ ပွဲလည်းပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ လာမယ့်အပတ်မှာ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ အကောင်းဆုံး
ကစားနိင်ဖို့ ကြိုးစားပ့ါမယ်လို့ ” ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:36 AM No comments: Links to this post
2008/09 Carling Cup HighLight (3)
2008/09 Champion League HightLight (14)
2008/09 FA Cup Highlight (6)
2008/09 Premier League HighLight (16)
2008/09 Premier League HightLight (24)
Euro 2008 Hight Lights (5)
Glory Goals (2)
Goals Of The Month (5)
International Friendly Match HightLight (1)
Internationals Friendly Match HightLight (2)
News English (58)
Season Reviews (1)
ဒီတပတ် အကောင်းဆုံး ၁၁ ယောက် (1)
ရှေ့တန်း - အနယ်လ်ကာ ၊ ဒရော့ဘာ ၊ အကာလူး ၊ ဆန်းတို့စ်
အလယ်တန်း - လမ်းပတ် ၊ ဘောလက် ၊ အက်ဆီယန် ၊ ဂျိုလ်ကိုး ၊ မီခေးလ် ၊မာလူဒါ ၊ ဒေကို ၊ စင်ကလဲယား ၊ ပီယန်း
နောက်တန်း - တယ်ရီ ၊ ကာဗလ်ဟို ၊ အဲလက်စ် ၊ ဖာရဲရား ၊ ဘလက်တီ ၊ အက်ရ်ှလေကိုး ၊ ဘောင်ဆင်ဝါ ၊ အိုင်ဗန်နိဗစ် ၊ မန်စီနီ
ဂိုး - ပီတာဆက်ခ်ျ ၊ ကူဒီစီနီ ၊ ဟီလာရီယို
ပွဲ( ၃၅ ) ၊ အဆင့် ( ၃ ) ၊ နိင်ပွဲ ( ၂၂ ) ၊ ရှုံးပွဲ ( ၅ ) ၊
သရေ( ၈ ) ၊ ရမှတ် ( ၇၄ - မှတ် ) ၊ ရဂိုး ( ၅၉ ) ၊
ပေးဂိုး ( ၂၂ ) ၊ ဂိုးကွာခြားချက် ( + ၃၈ )
အနယ်လ်ကာ ( ၁၇ ) ဂိုး
လမ်းပတ် ( ၁၂ ) ဂိုး
အကာလူး ( ၆ ) ဂိုး
ဒရော့ဘာ ( ၅ ) ဂိုး
မာလူဒါ ( ၅ ) ဂိုး
ဒေကို ( ၃ ) ဂိုး
ဘလက်တီ ( ၃ ) ဂိုး
ဂျိုကိုးလ် ( ၂ ) ဂိုး
ဘောက်ဆင်ဝါ ( ၂ ) ဂိုး
ကာဗယ်လ်ဟို ( ၁ ) ဂိုး
ဘောလက် ( ၁ ) ဂိုး
အဲလက်စ် ( ၂ ) ဂိုး
တယ်ရီ ( ၁ ) ဂိုး
အက်ဆီယန် ( ၁ ) ဂိုး
ပွဲစဉ် ( ၆ ) ၊ အဆင့် ( ၂ ) ၊ နိင်ပွဲ ( ၃ ) ၊ သရေ ( ၂ ) ၊ ရှုံးပွဲ ( ၁ ) ၊
ရဂိုး ( ၉ ) ဂိုး ၊ ပေးဂိုး ( ၅ ) ၊ ဂိုးကွာခြားချက် ( + ၄ ) ၊ ရမှတ် ( ၁၁ ) မှတ်
ပထမအကြော့ - လီဗာပူးလ် ၁း၃ ချဲလ်ဆီး
ဒုတိယအကြော့ - ချဲလ်ဆီး ၄း၎ လီဗာပူးလ်
( နှစ်ပွဲပေါင်း ချဲလ်ဆီး ၇း၅ လီဗာပူးလ် ဖြင့် ချဲလ်ဆီး ဆီမီးရောက်
လမ်းပတ် - ၃ ဂိုး
ဒရော့ဘာ - ၃ ဂိုး
အနယ်လ်ကာ - ၂ ဂိုး
တယ်ရီ - ၂ ဂိုး
အိုင်ဗန်နိဗစ် - ၂ ဂိုး
မာလူဒါ - ၁ ဂိုး
ဂျိုကိုးလ် - ၁ ဂိုး
အက်ဆီယန် - ၁ ဂိုး
ဒရော့ဘာ - ၁ ဂိုး
အဲလက်စ် - ၁ ဂိုး
Next Match -
ဒရော့ဘာ ( ၃ ) ဂိုး
ဘောလက် ( ၃ ) ဂိုး
လမ်းပတ် ( ၂ ) ဂိုး
အနယ်လ်ကာ ( ၁ ) ဂိုး
အကာလူး ( ၁ ) ဂိုး
အဲလက်စ် ( ၁ ) ဂိုး
မာလောက်ဒါ ( ၁ ) ဂိုး
Burnley ( H ) အား အချိန်ပိုတွင် ပယ်နယ်လ်တီဖြင့် ရှုံးနိမ့်
မာလူဒါ ( ၁ ) ဂိုး
ဒရော့ဘာ ( ၁ ) ဂိုး
ဖာရဲရား ၊ ဒေကို ၊ ဂျိုကိုးလ် ၊ ကာဗယ်လ်ဟို
မိနစ်အများဆုံး အသုံးပြုသော ကစားသမား
လမ်းပတ် ( ၂၃၂၃ မိနစ် )
ဘောက်ဆင်ဝါ ( ၂၂၄၉ မိနစ် )
မီခေးလ် ( ၂၀၈၉ မိနစ် )
CHELSEA Updates !!!!!
CHELSEA Song ! Blue is the colour !
How Can You Play Fantasy Game ???
Join To League Code No
How Can You Watch Football Match At Online ???
မြန်မာ - ချဲလ်ဆီးဖန်များ
1 .A T Zar
9 .bluelion , barronbala
26.Flame of Passion
46.ko ko lu soe
အပြာရောင် ( သို့မဟုတ် ) အောင်မြင်မှု့ကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေသူများ
Owner - Roman Abramovich
Home Kit ( 2010/11 )
Away Kit ( 2010/11 )
Third Kit ( 2010/11 )
Training Kit ( 2010/11 )
Tel: 0871 984 1955
DvBSports ( မြန်မာ )
Mutdfan ( မြန်မာ )
Coach - Ancelotti
December2- 1980
21 Oct 1975
May 20 - 1982
John Obi Michael
April4- 1987
June 13 - 1980
June 20 - 1978
December3- 1982
Date Of Birth - 14 Mar 1979
August5- 1985